Serasera.org - Blog: juin 2007
Fitaovana ampiasain'ny serasera.org
Mahafaly ny milaza amintsika fa nampitomboina iray indray ny lohamilina (serveur) miasa eto amin'ny serasera. Izany no natao dia mba hanatsarana hatrany ny tolotra aroso ho antsika. Amin'izao fotoana izao izany dia misy serveurs dédiés 5 ampiasain'ny serasera.
- 1 ampiasain'ny takelaky ny domaine serasera.org
- 1 ampiasain'ny radiovazogasy.com (site sy serveur manaparitaka ny feo)
- 1 ampiasain'ireo site hafa (blaogy, dokambarotra sy ireo takelaka vitsivitsy ampiantranoin'ny serasera)
- 1 ao antranon'i JM sy Lanto misy ny hira rehetra (7000 latsaka) sy misy ny DJ mandrindra ny hira mandeha
- 1 vao azo izay hasiana ny hanampiana ny serveur ao amin'i JM.
Isaorana be dia be ireo rehetra miara-miasa amin'ny fitantanana sy fandrindrana ireo rehetra ireo. Indrindra fa ry zareo any Strasbourg izay miara-misalahy akaiky.
Namana maromaro ihany koa no miara-miasa hampandeha ity serasera ity na dia tsy eo amin'ny ara-pitaovana aza. Manamarina ny sary misy mampiditra sy mamafa izay tsy mety. Mijery ny tononkira sy manitsy ny diso. Mampiditra hira sy manao montage ao amin'ny radiovazogasy. Miandry trano ao amin'ny chat. Mandrindra sy mamindra ny hevitra eto amin'ny dinika hifanaraka amin'ny lohahevitra. Miantso an-taroby aty amiko isaky ny misy zavatra tsy mety. Ireo sy izay tsy voatanisa dia efa asa lehibe fanampiana ny serasera koa isaorana ny rehetra amin'ny mbola fahavononana hanampy hatrany.
Raha asiana resa-bola kely dia eo amin'ny 40 Euros isambolana isaky ny serveur eo no vola mivoaka mivantana ao amin'ny fitantanana serasera. Izany hoe 200 Euros isambolana. Ankoatr'ireo dia misy ny vola mivoaka isantaona ho an'ny Artista sy ho an'ny fividianana CD hampitomboana hatrany ny hira ary ho an'ny maintenance isantaona. Izahay rehetra izay voakasika mivantana moa dia samy manana ny asanay ankoatra ny serasera ka izahay no miezaka mameno izay ilaina rehetra. Misy kosa anefa ireo namana maromaro izay tsy hary ho voatanisa eto manome fanampiana hitohizan'ny asa hatrany. Isaorana daholo koa.
Izay indray ary aloha fa ity ny rohy mety ho ilaina raha hanampy ara-bola
Publié par Eugene Heriniaina à 6/19/2007 01:17:00 PM Aucun commentaire: Liens vers cet article
Libellés : serasera, serveurs